WOWOW tuubada qasista weelka jikada - tubbada naxaasta
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Buundada Jikada Bridge / WOWOW Bridge Jikada Mashiinka Mashiinka Mashiinka - Lagu Nadiifiyay Nickel
WOWOW Bridge Jikada Mashiinka Mashiinka Mashiinka - Nadiifiyay Nickel
Qubeysku waa badeecad loo baahan yahay in loo isticmaalo maalin kasta nolosheena, taas oo noogu habboon inaan isticmaalno biyaha. Waxaa ka mid ah, tubada qasabada biyaha waa sheyga ugu caansan. Qaabka buundada tubada jikada waxay leedahay qaab gaar ah, Dooro tuubadan si aad ugu haqabtirto baahiyahaaga qurxinta.
Tubbada tubada jikada Bridge
Xaqiiqdii, tubada cuntada ee jikada waa shey alaabta ka sameysan jikadaada oo aad maalin walba isticmaasho. Dhowr jeer xitaa. Tubada saxanka jikada ee jikada ayaa ugu haboon in biyaha la cabbo, biyo la cabbo, ama la nadiifiyo jikadaada. Taasi waa sababta aad u rabto inaad u doorato tubbada jikada si xikmad leh si aad ugu haqab tirto waxa aad jeceshahay. Kaliya maaha keliya quseysa qaabka jikadaaga, laakiin sida xaqiiqada ah sidoo kale quseeya shaqadeeda iyo wax qabadkeeda. Qolka jikada jikada buundada ee WOWOW wuxuu ku siinayaa tubo qaas u gaar ah oo qaabaysan oo fulisa rabitaankaaga qurxinta. Qalabka jikada ee dhuuban ee loo yaqaan 'Retro retro colors' waxay mashruuc ka sameysan yihiin qaab faransiis ah oo dalka Faransiiska ah jikadaada. Taasi waxay ka dhigeysaa naqshadda jikadaaga mid gaar ah. Masawda dhaadheer ee qurxinta leh waxay siineysaa jikadaada taabashada qurxoon ee ay ugu baahan tahay inay ku siiso walax-walax.
Nuuradda naxaasta ah ee la caddeeyay waxay bixisaa muuqaal qurux badan iyo ubax qurxin jikadaada. Iyada oo ay weheliso naqshadda lafteeda, ayaa sida xaqiiqada ah ay tahay mid ka mid ah tubbada tubada jikada ee nooca. Naqshadeeyayaasha WOWOW way yaqaanaan sida loo naqshadeeyo tubooyinka jikada ee geesiga ah. Waxaad ka ogaan kartaa taas waxkastoo. Tubooyinka jikada ee WOWOW way ka duwan yihiin tubooyinka kale ee jikada. Naqshadeeyayaashu waa wax xiiso leh, way yaqaanaan waxkasta oo ku saabsan naqshadaha jikada, waxa ugu muhiimsanna waa inayan waligood ka fikirin saamaynta tubbada weelka jikada ee ku habboon qaanadda jikada. Waxay ku qanacsan yihiin inay wax uun ka beddeli karaan naqshadda jikada kasta, oo ay intii karaankooda ah ugu dadaalaan sidii ay u gaari lahaayeen heerka-kiimikaad ee jikadaada sidoo kale.
Qubista tubada jikada Ergonomic
Raaxo waa wax walba. Markaad isticmaaleyso tubbada weelka jikada ee buundadaada dhowr jeer maalintii, waxaad u baahan tahay naqshad ergonomic ah oo ay fududahay in la hayo oo la xakameeyo. Gacan-yarayaashu waxay u socdaan si habsami leh si ay u xakameeyaan socodka biyaha si fudud oo sax ah, labadaba biyo kulul iyo qabow. Sidan ayaad ku qasi kartaa heerkulka biyahaaga ugufiican. Ka sokow, tolka dheer ee sida qalooca u gaarka ah waxay bixisaa khiyaamo biyaha ka soo horjeedda iyo biyo daadanaya oo qulqulaya ka dhigaya tubbada weelka jikada in ka badan kuwa raaxada leh ee la isticmaalo.
Qulqulka biyaha tubada weelka jikada ee buundada ayaa waliba dib loo bilaabaa sababtoo ah hal-abuurnimadeeda cusub Neoperl ABS. Kaliya maahan qalabkani inuu waxoogaa cadaadis ah u fidinayo socodka biyaha si loo badbaadiyo biyaha. Ha ka fekerin inaad ku kaydsan karto wax ka badan 50% biyo qalabkan gacanta ku haya. Xaqiiqdii waad ku ogaan doontaa tan biilkaaga biyaha. Dhinaca kale waayo-aragnimadaada biyaha ayaa is beddelaysa. Si adag uma ogaan doontid inaad isticmaasho biyo yar, gaar ahaan marka cadaadiska biyuhu sarreeyo. Ugu dambeyntiina waxaad yeelan doontaa durdur adag si aad ugu nadiifin kartid waxyaabaha si fudud diyaarad awood leh, iyadoo aan loo eegin nooca biyaha aad isticmaaleyso. Waxaad si fudud uga takhalusi kartaa aaladaha ABS adiga oo aan haysan wax qalab ah si aad uga saarto mid nadiif ah ama aad ku beddesho. Ka digtoonow inaad si joogto ah u nadiifiso aaladda dabka haysa maadaama hadhaaga biyaha adag ay ku urursan yihiin halkan. Xitaa maaha inaad ka saarto aaladda lafteeda si aad u nadiifiso si joogto ah. Kaliya adoo farta ku garaac fartaada, waxaad ka saari kartaa haraaga adag si fudud oo fudud.
Qubeyska jikada weyn ee biriijka bir bir culus
Tubada jikada buundada buundada waxaa laga dhisay naxaas aad u adkaysi u leh miridhku isla markaana si heer sare ah u adkaysata. Sidaa awgeeda tubbada jikada buundada waxaa loo qaabeeyey inay sii jirto sanado badan. Kaliya ma ahan isku xirayaasha jikada jikada inay ka samaysan yihiin naxaas adag. Sidoo kale isku xirka PS inji NPS wuxuu ka kooban yahay naxaas tayo sare leh. Waad ogtahay markii aad gacanta ku qabato tubada weelka jikada jikada. Miisaankiisa awgiis si dhakhso ah ayaad u sheegi kartaa in agabku aaney keydin oo ay kuu soo bandhigaan qiimaha ugu fiican ee lacagta aad heli karto.
Dusha sare ee loo yaqaan 'nickel' burush-ka ah kaliya ma siinayso tubbada tubada jikada ee buundadaada dhammeystir wanaagsan, waxay sidoo kale ilaalisaa tubada weelka jikada. Sababta oo ah tayada dhammeystiran, waxay ku siinaysaa khibrad ka hortagga xoqidda iyo nabaad-guurka. Qubeyska jikadaada jikada buundada uma ahan mid u nugul xoqida gabi ahaanba, waxaana lagu hayn karaa qaab wanaagsan waqti dheer. Dhamaadka naxaasta ah ee loo yaqaan 'nickel dusha' wuxuu sidoo kale ku siinayaa faa iidada in daabacayaasha faraha aysan ku sii nagaan futetka jikada. Waxaad helaysaa tubada jikada jikada oo qurux badan oo nadiif ah oo muuqaal leh marwalba.
Tubada qolka jikada ee jikada qadiimiga ah
Tubada jikada buundada ee WOWOW waxay u egtahay tubada jikada qadiimiga ah. Maaha wax aan ahayn buundada weelka jikada ee buundada lagu adeegsado goobo badan oo ganacsi sidoo kale goobo raaxo leh. Qolka jikada buundada buundada waxaa loo qaybiyay si ay u matalaan quruxda qadiimiga ah qarnigii 20aad. Qubayska jikada buundada ee buundada ayaa siisa ifafaale ifaya sida caadada u dhalaalaysa dhalaalka jikadaada. Dhererka tubbada jikada buundada waa qiyaastii 8 inji. Xaraashka dheer ee dusha sare leh ayaa sida muuqata si mug leh uga qaybqaatay qaabkeeda. Qolka qubeyska jikada ee dammaanadda leh Qalabka WOWOW waa mid aan la adeegsan karin. Adeegsiga agabyo tayo sareeya oo tayo wanaagsan leh iyo dhammeystir fiican, tubada jikada buundada waa mid waarta. Iyada oo ay weheliso habka hal-abuurka leh ee soo saarista tubooyinka jikada, WOWOW waxay ogtahay sida loo ilaaliyo kharashaadka sida ugu macquulsan uguna macquulsan. Sidaas awgeed, WOWOW ayaa ku siin kara qiimaha ugu wanaagsan ee lacagta. Waxaan ku qanacsanahay saamigayaga tayada-qiimaha waxaanan ku siin karnaa damaanad 90-maalmood ah oo lacag-la aan ah oo la soo celiyay. Haddii aad ka heli lahayd tubbada ka wanaagsan isla isla qiimaha, ama saxanka jikada oo la mid ah oo ka qiimo jaban, si buuxda ayaan kuu soo celinaynaa. Iyadoo aan wax su'aalo ah la weydiin, iyo dhib la'aan. Waxaan ku kalsoonahay waxsoosaarkayaga waxaana ku qanacsanahay inaad sidoo kale sameyn doontid.
Sida dhammaan tubooyinka jikada ee WOWOW, waxaa lagaa hubinayaa muddada damaanad qaadida oo aan ka yarayn 5 sano. WOWOW wuxuu dhaafayaa dhammaan heerarka warshadaha, wuxuuna ku sameeyaa sidoo kale qaddarka dammaanad qaadida. Waxaan dammaanad ka qaadaynaa tubada tuubada jikada inay si fiican u shaqeyneyso ugu yaraan 5 sano. Khasab kuguma aha inaad khatarta qaado, laakiin annagu waan yeeli doonnaa. Haddii tubada saxanka jikadaada buundada ay ku dhici laheyd waxyeello inta lagu jiro muddadan, waxaan si farxad leh ugu beddeleynaa mid cusub iyada oo aan wax dhibaato ah dhicin. Damaanad qaadkaani waa ballanqaadkeena adiga.
Faa'iidooyinka tubbada tubbada jikada buundada oo si kooban loo xaqiijiyo:
• Muuqaal jilicsan oo casri ah
• Qaab qaanso dheer oo dhaadheer
• dhammeystiran burush naxaas ah
SKU: 2311501 Categories: Buundada Jikada Bridge, Qubeyska jikada Tags: Bridge, Nickel caday, Kali Lever
Iyadoo aan lagu buufin dhinac